Amathuluzi Angcono Kakhulu Okwenza Izinwele Ezinwele Eziguquguqukayo E – SL Raw Virgin Hair LLC.
Uma uyintombazane egobile, udinga amathuluzi okwenza izinwele angcono kakhulu ezinwele ezigoqekile. Bheka izincomo zethu zamathuluzi esitayela sokushisa ango-2022 ezinwele ezigoqene
Uma kuziwa kumathuluzi okwenza izinwele zezinwele ezigoqekile, kufanele sikhathazeke ngokushwabana, ukomisa, nokulimala kokushisa.
Ngakho-ke, yimaphi amathuluzi angasebenza kangcono kakhulu kunqubo yokwenza isitayela? Ukukusiza womise futhi ugoqe ekhaya ngaphandle kokukhathazeka ngalezi zinkinga?
Yebo, njengoba sinokuthunyelwe okumbalwa ekwenza isitayela izinwele zakho ezigoqekile, sicabange ukuthi bekuyisikhathi esihle sokubheka amathuluzi onawo. angasebenzisa ukufeza lokhu kubukeka. Kungakho sizongena kokuthunyelwe kwanamuhla kumathuluzi angcono kakhulu okwenza izinwele ezinwele ezigoqekile ezithungwe ngo-2022.
Konke lokhu kungamathuluzi azanyiwe, ahloliwe futhi afakazelwe asetshenziswa futhi athandwa ngabadwebi bezitayela kodwa kulula ngathi sonke ukuwasebenzisa ekhaya.
Nawa amathuluzi/amabhrendi ezinwele ezingu-5 zezinwele ezisontekile esizozibuyekeza
Sizokwabelana nawe ngalabo esibathandayo Isitayile Sosaziwayo, u-LeAna McKnight, umsunguli we-SL Raw Virgin Hair. Futhi uma ungumfundi wesitayela, hlola ithuluzi lebhonasi, eligunyazwe salon ukuze lithuthukise ulwazi lweklayenti lakho.
Amathuluzi Angcono Kakhulu Okwenza Izinwele 1 – Instyler
Ku-LeAna, i-Instyler Rotating Iron iyintandokazi esethiwe uma ubheka ukuzuza izinwele ezikhanyayo. Inikeza ukuphakama okukhulu nokugcwala kwezinwele.
Leli thuluzi liza nezilungiselelo zokushisa ezingu-3 ezenza kube lula ukugwema ukulimala kokushisa.
Kodwa-ke, uzodinga ukusebenzisa izandla zombili ukufeza izinwele zakho ozithandayo. Ngakho-ke, kuzozwakala kungathandeki ekuqaleni. Ukuze usebenzise, ​​uzodinga ukuvunguza izinwele zakho ngesandla esisodwa ngenkathi ucindezela i-curling iron ngesinye isandla ukuze wenze i-curling iron isebenze. Kuzoba lula kakhulu ukuyisebenzisa uma usuyitholile. Futhi isitayela sakho sizohlala amahora amaningi.
Ithiphu ye-Pro: Sebenza ngezigaba ezincane nge-Instyler. Futhi uma usebenza kancane i-Instyler yakho eduze kwe-hair shaft, ama-curls akho azophuma kahle.
Okuthunyelwe okwabiwe ngu-SL Raw Virgin Hair® (@slrawvirginhair)
Amathuluzi Angcono Kakhulu Okwenza izinwele 2 – Ukushisa kwe-FHI
I-FHI Heat iphethe amathuluzi okuya kuwo aphakathi kwamantombazane anezinwele ezisontekile. Kulo mkhiqizo, kunamathuluzi amabili esiwancomayo owezi-2022.
Ziphatha zomisa izinwele ezingasindi eziphelele zokomisa nokwelula izinwele ezisontekile. Anezilungiselelo zokushisisa ezintathu, ezinekama nezokunamathiselwe kwi-diffuser, kanye nesithombe esipholile sokuvala isitayela sakho.
Aklanywe kahle ama-curling irons anhle kakhulu futhi enziwe nge-ceramic ukuze kube nokusabalalisa ukushisa okungcono kakhulu. Insimbi ebukeka icwebezelayo itshuza ezinweleni kalula ngaphandle kokushiswa izinwele futhi ishiye izinwele zakho zibe nesiphetho esihle esicwebezelayo. Ngaphezu kwalokho, zisebenza ngokushesha.
Amathuluzi Angcono Kakhulu Okwenza Izinwele 3 – I-Beach Waver
Uma ufuna insimbi egoqayo ekutholela amagagasi olwandle kanokusho FUTHI ikwenzela wonke umsebenzi, lapho-ke i-Beach Waver iyithuluzi elihle elinconywe i-stylist yethu
Ingenye yama-ayina okugoqa wobuchwepheshe obuphezulu ebanda kakhulu emakethe ka-2022. I-ayina egoqayo engasindi, ingahle ibhalwe njengenye yama-ayina okugoqa alula ake asungulwa. Iza nesethingi yokushisa ephezulu nephansi, ishisa ngokushesha, futhi inesici sokuvala ngokuzenzakalelayo.
Ungathola amagagasi amahle noma ama-curly curly ngaphansi kwemizuzu engama-30 uma usuwatholile. Kuhle futhi ekwenzeni izinwele eziwugqinsi.
I-Beach Waver curling iron inikeza ukuzungezisa kanye nokubamba esisekelweni. Uma i-ayina ivuliwe, ungasebenzisa inkinobho ukuyiyeka isonge izinwele zakho ngaphandle kwesidingo sokuthi usebenzise isihlakala sakho ukusonta.
Ithiphu ye-Pro: Ngamagagasi olwandle, hlukanisa futhi unamathisele izinwele zakho ku-base clamp, ushiye iyintshi noma ngaphezulu ngaphandle. Bese, cindezela inkinobho ukuze uvule i-curler. Bamba imizuzwana embalwa, bese uyakhulula. Qedela ezinye izinwele futhi ujabulele ama-curls akho amahle olwandle.
Okuthunyelwe okwabiwe ngu-Sarah Potempa (@sarahpotempa)
Amathuluzi Angcono Kakhulu Okwenza izinwele 4 – Dyson
I-small and compact Dyson blow dryer ingesinye sezincomo zethu ezinhle kakhulu zamathuluzi esitayela sasekhaya sango-2022. Kodwa kuwufanele utshalomali, ngokuya kwabathile bezitayela nabasebenzisi basekhaya.
I-Dyson blow dryer yakho ingakusondeza eduze komshini wokucofa umoya ophelele noma usilika njengokwenza esalon ekhaya. Izinkinobho zokushisa nomoya obandayo zitholakala ngemuva kwesomisi futhi ngaphandle kwendlela ukuze ukwazi ukubamba umshini wokomisa ngokuphephile ngaphandle kokushintsha izilungiselelo ngephutha.
Khetha izilungiselelo zakho, bese ulungele izinwele ezome ngokuphelele ngaphandle kokushwabadela noma ukuqina kwezinye izishisi zebhajethi ephansi ngaphansi kwemizuzu engama-20.
Ithuluzi lesibili Dyson Airwap Complete Styler. Kuyikhithi enhle ephelele uma ufuna inketho ehlangene yonke-in-one yokomisa nokugoqa, kanye namagagasi olwandle afaneleka kakhulu noma ama-curls ekhaya.
I-Dyson Airwrap ifaka okunamathiselwe kwi-blow dryer curling esomisa futhi esonge izinwele zakho ngesikhathi esifanayo. NjengeBeach Waver, izokugobela izinwele uma usufake izinwele kokunamathiselwe bese ucindezela inkinobho. Okunamathiselwe kokugoqa, anamabili osayizi ngamunye ukuze agoqe aye ezinhlangothini eziphambene esikhundleni sokuzama ukuthola ukuthi iyiphi inkinobho okufanele uyicindezele.
Iza futhi nokunamathiselwe kwensimbi yebhulashi ekwazi ukukama futhi iqondise izinwele zakho zibe siphetho esibushelelezi ngomzimba.
Amathuluzi Angcono Kakhulu Okwenza izinwele 5 – T3 Micro
T3 Micro ingenye uhlobo lwethuluzi lokufudumeza oludumile lwango-2022 olunikeza kokubili okomisa ama-blow nama-curling irons.
I-T3 Micro blowdryer ingenza izinwele zakho zome emizuzwini embalwa nje ngaphandle kokuzwa ukushisa okudlulele Zithulile, azisindi, futhi ziyasebenza. Uzobona nokushoda okuqinisekile kokunyakazisa nokugedla kwezinwele zakho ezigoqekile kusukela kubuchwepheshe be-ionic yedijithali. Inkinobho yokudubula epholile isiza ukukhiya ngesitayela sakho. Izinkinobho zezilungiselelo zisendaweni lapho ungeke uziguqule khona ngephutha.
I-T3 Micro curling irons isebenza nanoma yiluphi uhlobo lwezinwele futhi ingahlelwa ngezilungiselelo zakho zokushisa ezifanelekile. Ngeke udinge ukuchitha isikhathi esiningi ugoqa izinwele zakho ukuze uthole lawo magagasi enziwe ebhishi asehlehlisiwe ngale iron.
Nakuba u-LeAna engakawahloleli mathupha amathuluzi e-T3 Micro kanye ne-Dyson, ontanga yakhe baphethe ngokuthi bayimali yangempela futhi.
Ibhonasi: Ithuluzi lesitayela sokushisa labachwepheshe bezitayela phakathi kwethu
Ngakho-ke, kuthiwani uma ungumdwebi wesitayela ufuna uhlobo olugunyazwe esaluni oluthandwa abalungisa izinwele abangochwepheshe oluzokusiza uthuthukise ukunakekelwa kwezinwele zeklayenti lakho? Njengochwepheshe abaningi abanamalayisense, u-LeAna uncoma uhlobo lwe-Marcels. Yena ngokwakhe usebenzisa ama-ayina okugoqa u-Marcel yena kanye namakhasimende akhe, okuhlanganisa namakhasimende akhe osaziwayo.
Ama-curling irons e-Marcel akuvumela ukuthi ulawule ukushisa okufakwa ezinweleni ukuvimbela ukuthi zingabhakwa noma zishiswe zibe crisp. Ngesigxivizo esishwiba mahhala, uyakwazi ukulawula ngokuzenzela inqubo yokugoqa ukuze uthole ama-curl anembe kakhudlwana kumakhasimende akho.
Imaphi amathuluzi wethu okwenza izinwele ka-2022 onalo njengamanje?
Futhi iyiphi ohlela ukuyingeza ngo-2022 futhi ngani? Sitshele kumazwana angezansi.
Kodwa ngaphambi kokuthi uhambe, khumbula ukusebenzisa isivikeli sakho sokushisa ngaphambi kokufaka noma iliphi ithuluzi lokushisisa izinwele zakho, kungakhathaliseki ukuthi izinwele zakho zemvelo noma iwigi yakho yezinwele engakazalwa. Ikuvikela ekulimaleni kokushisa futhi ivumele amawigi akho ezinwele zemvelo ahlale isikhathi eside.